Yaa Guulaysan Kara haddii uu dagaal ganacsi dhexmaro Shiinaha iyo Mareykanka? – AwKutub News
Yaa Guulaysan Kara haddii uu dagaal ganacsi dhexmaro Shiinaha iyo Mareykanka?
By awkutubnews July 17, 2018
Leave a Comment on Yaa Guulaysan Kara haddii uu dagaal ganacsi dhexmaro Shiinaha iyo Mareykanka?
Dowladda Shiinaha ayaa Liu He oo ah sarkaal sare oo u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha waxa ay u dirtay dalka Mareykanka, halkaa oo muddo shan maalmood ah uu wadahadal dhanka ganacsiga ah la yeelan doono wasiirka maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin.
Waxaa la rajeynayaa in Shiinuhu uu shirkadaha ganacsiga ee Mareykanka u ogolaado in si fudud ay ganacsiga uga sameeyaan gudaha dalka Shiinaha halka Washington ay iyaduna cadaadiska ka yareyn doonto shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay Shiinaha.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhiggiisa Shiinaha, Xi Jinping, uu kala shaqeynayo sidii shirkadda isgaarsiinta Shiinaha ee ZTE ay cagaheeda dib ugu istaagi lahayd.
Isbadalkan ku yimid mowqifka Trump ee ku aadan Shiinaha ayaa imaanaya usbuucyo uun kaddib markii xukuumadda Washington ay shirkadaha Mareykanka ka mamnuucday in shirkadda ZTE ay ka iibiyaan qalab muddo toddobo sano ah maadaama shirkaddaasi ay jebisay heshiis Mareykanka uu kula galay in aysan qalabkeeda ka iibin Iiraan.
Hadallada kulul ee labada dhinac ay is dhaafsanayeen ayaa dhaliyay jahawareer xooggan.
Trump ayaa bishii la soo dhaafay Twitter-kiisa ku soo qoray in dalkiisu uusan dagaal dhanka ganacsiga ah kula jirin Shiinaha, waxaase uu markiiba amar ku bixiyay in canshuuraad dheeri ah oo gaaraya 100 bilyan oo doolar lagu soo rogo baayacmushtariga Shiinaha ka imaanaya. Trump ayaa horey 50 bilyan oo doolar oo canshuur ah ku soo rogay waxyaabaha Mareykanka looga soo dhoofiyo Shiinaha.
Waxaase xusuus mudan in Mareykanku uu sanadkii la soo dhaafay oo kaliya Shiinaha ka soo dhoofsaday baayacmushtari kor u dhaafaya 500 oo bilyan oo doolar.
Dhanka kale, madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, ayaa sidoo kale ku adkeysanaya in uusan dooneyn dagaal dhanka ganacsiga ah.
Balse Shiinaha ayaa ku hanjabay in uu canshuur ku soo rogi doono ilaa 106 ka mid ah alaabaha Mareykanka uu u dhoofiyo Shiinaha, waxaana wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ay ku hanjabtay in aysan ka laba labayn doonin in ay difaacato danaheeda.
Haddaba maxay tahay cawaaqibka maaliyadeed ee ka dhalan karaya murankan ganacsi?
Marka la eego isu dheeli tirnaanta ganacsi ee hadda jirta, waxaa muuqanaya in Shiinuhu oo dakhligiisa lagu qiyaaso ku dhawaad 15 tiriliyoon oo doolar ay mustaqbalka dhow dhibaatada ugu ba’an ka soo gaari doonto murankan.
Shuang Ding, oo ah dhaqaaleyahan reer Shiina ah oo ka tirsan bangiga Standard Chartered isla markaana ka tirsanaan jiray hay’adda IMF ayaa sheegaya in ay muuqato in labadani waddan aysan kala maarmin dhaqaale ahaan.
Sida lagu xusay xog sanadkii 2016 uu shaaciyay xafiiska Mareykanka u qaabilsan ganacsiga, dakhliga Shiinaha ka soo galay ganacsiga uu Mareykanka la leeyahay waxaa lagu qiyaasay 578.2 bilyan oo doolar, arrintaa oo ka dhigtay dalka ganacsiga ugu ballaaran la leh Mareykanka.
Marka la eego wadartan, Mareykanka ayaa Shiinaha u dhoofiyay baayacmushtari lagu qiyaasay 115.6 bilyan oo doolar, halka uu ka soo dhoofsaday agab ganacsi oo lagu qiyaasay 462.6 bilyan oo doolar.
Shuang Ding ayaa sheegaya in inkastoo hadda dhaqaalaha Shiinuhu uu aad ugu tiirsan yahay Mareykanka, haddana waxaa jira isbadal ah in Mareykanka uu dhaqaale ahaan noqonayo ku tiirsan Shiinaha, waxa uuna rumeysan yahay in aysan jiri doonin waddan gooni ah oo guul ka sheegan karaya murankan ganacsi ee labada waddan u dahxeeya.
“Ganacsi doqonnimo ah”
Qoraal caro xambaarsan oo uu Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in caqabadaha dhanka ganacsiga ah ee Mareykanka uu kala kulmayo Shiinaha ay tahay in la yareeyo, qaabka ganacsi ee hadda u dhaxeeya labadani waddanna uu yahay “mid doqonnimo ah”.
Trump ayaa ka ashtakooday caddaalad darro lagu hayo shirkadaha baabuurta sameeya ee Mareykanka oo Shiinuhu uu ka qaado 25% canshuur ah, halka kuwa Shiinaha ay bixiyaan 2.5% oo canshuur ah.
Balse sida caadiga ah, heshiisyada dhanka ganacsiga ma ahan kuwo hal maalin ah xal laga gaaro.
Heshiiska ganacsi ee hadda ka dhaxeeya labadani waddan ayaa ka dhashay tobaneeyo sano oo ay wada xaajood ku jireen, waxaana ay hadda ka caga jiidayaan in ay isbadal ku sameeyaan si ay ugu saleeyaan baahidooda ganacsi ee hadda taagan.
Murunkani ma mid siyaasadeed baa mise waa mid dhaqaale?
Usbuucyadii la soo dhaafay, waxaa cirka isku sii shareerayay dagaalka dhanka afka ah ee u dhaxeeya labadani waddan balse ilaa haatan ma jiraan wax iska baqalay xiriirkooga ganacsi.
Dhinac kastaa waxa uu diiwaangeliyay waxyaabaha dhinaca kale uu u soo dhoofiyo oo ay tahay in canshuur lagu soo rogo, balse sida uu sheegaya Ding, waxaa suurtagal ah in murankan uu noqdo mid muddo dheer jiitama.
Dal kastaa waxa uu doonayaa in uusan u muuqan in uu ku khasaarayo murankan ganacsi ee u dhaxeeya.
Isbadalka ka jira Shiinaha ma mid ku yimid cadaadiska Mareykanka mise dana yay ku wadataa?
Caqabadaha wajahaya madaxweyne Xi Jinping ayaa waxaa ka mid ah sidii uu isbadal u gaarsiin lahaa Shiinaha isaga oo aan loo arkin in uu jileec u muujinayo dalabka Mareykanka.
Ding ayaa rumeysan in dowladda Shiinuha ay sidoo kale arkayso in wada xaajoodka ganacsi ee kala dhaxeeyo Mareykanka uu faa’iido u leeyahay dalkiisa oo heli doono maalgashi shisheeye oo aad u weyn.
Dagaal dhanka tignoolojiyadda ah
Marka la eego tartanka dhanka tignoolojiyadda iyo mukhaabaraadka ee ka dhaxeeyo labadani dal, waxa xaqiiqa ah in Mareykanka uu ku gacan sarreeyo.
Waana guulaha dhanka tignoolojiyadda ah ee Shiinaha qorshaha ugu jirta marka la gaaro sanadka 2025 in la casriyeeyo wershadaha iyo tignoolajiyadda Shiinaha.
Qorshaha mustaqbalka ee madaxweyne Xi Jinping ayaa ah casriyaynta tignoolajiyadda, si uu ula tartamo caalamka intiisa kale isla markaana uu yareeyo farqiga dhanka tignoolajiyadda ah ee u dhaxeeya Mareykanka iyo dalkiisa.
Waana arrinta walwalka ku haysa Mareykanka isla markaana door muhiim ah ka qaadaneyso dagaalka dhanka ganacsiga ah ee labadani waddan.
Maxaa ka dhalan kara murankan?
Haddii murankan ganacsi uu cirka isku sii shareero, caqabadaha dhanka ganacsiga ah ee arrintaa ka dhalan karaya dhibaatooyin dhaqaale oo waxyeeleynaya dhaqaalaha labadani waddan.
Caqabadahani ayaa mustaqbalka waxyeeleyn karaya ganacsiga xitaa waddamada ka baxsan Mareykanka iyo Shiinaha maadaama ganacsiga caalamku uu isku xiran yahay.
Tusale ahaan, waddan ayaa waxa uu sameynayaa moobeelada gacanta, kaddibna waxaa lagu dhameys tiraa waddan kale. Marka, haddii ay dhacdo in waxyaabaha laga sameeyo batariga moobeelka oo Shiinaha laga keeno uu qiimahooda sarakaca, shirkadda sameynaysa taleefoonkaasi waxa ay ku khasban tahay in ay gasho kharash kale oo ay waddan kale ka keensato qalabkaasi, taa oo sababaysa in qiimaha uu ku fadhiya tateefoonkaasi uu sarakac ku yimaado.
Previous Entry Eritrea Oo Dib U Furatay Safaaraddeeda Adis Ababa
Next Entry Trump Oo Diiday Faragalinta Ruushka